3D Half sex doll (with voice and vibrate) – MM Online Shopping
3D Half sex doll (with voice and vibrate)
unicode gyi version
အိမျတှငျး​အောငျး​နတေဲ့ ​ဘျော​ဒါ​တှေ အတှကျ​ အိမျ​က​နကေိုမခှာခငျြ​ဖွဈ​သှားမဲ့ စီလီကှနျ​ အရုပျ​​လေးနဲ့မိတျ​ဆကျ​​ပေးပါမယျ​ ​ဆျော​ကိုအိမျ​ကို​ချေါထားသလိုမြိုး ပွီးပွညျ့​စုံ​စမှောပါ
နူးညံ့အိစကျ​တဲ့ စီလီကှနျ​ အသားကို အသုံးပွုထားပါတယျ​ ကိုငျ​လိုကျ​တာနဲ့ ဖိခငျြ​စိတျ​ဖွဈ​သှား​စမေဲ့ အသားမြိုးဖွဈ​ပါတယျ​
တုနျ​ခါမှုပါဝငျ​ပီး ​ဆျော​​အျော​တဲ့ အသံပါပါတယျ​
​ဆျော​ညညျးသံက ဒီတိုငျးကွီးအသံမွညျ​​နတောမြိုးမဟုတျ​ဘဲ အသားကို ထိမှသာ ​အျော​ညညျးတာမြိုးဖွဈ​ပါတယျ​ ​ပွောရရငျ​ ​ဆျော​ကို လုပျ​လိုကျ​ရငျ​ထှကျ​လာတဲ့ ​ဆျော​ညညျးသံမြိုးပါ
​အျော​ညညျးသံ ၃ မြိုး​လောကျ​ပါပါတယျ​
ဓာတျ​ခဲထညျ့​ရတာမြိုးမဟုတျ​ဘဲ အားသှငျးပုံစံဖွဈ​လို့ အလုပျ​ရှုပျ​သကျ​သာ​စပေါတယျ​
အရှညျ​ ၁၆ လကျ​မ
ရငျ​နဲ့ တငျ​အကယျြ​ ၁၀ လကျ​မရှိပါတယျ​
ပထမဆုံး Link ကိုဝငျရာတှငျ ပစ်စညျးအမြိုးအစားအမြားကွီး ပျေါလာပါလိမျ့မယျ .. အဲဒီအထဲကမှာ မိမိ သိလို့သော ပုံကို လကျဖွငျ့ ထပျနှိပျပေးပါ . ထိုပစ်စညျးအကွောငျး အသေးစိတျရှငျးထားသော နရောကိုရောကျသါားပါမညျ ။ ထိုနရောတှငျ စာ သို့ ပုံ သို့ video တငျထားပါတယျ တခြို့နရောတှငျတော့ video မပါပါ
အိမ်တွင်း​အောင်း​နေတဲ့ ​ဘော်​ဒါ​တွေ အတွက်​ အိမ်​က​နေကိုမခွာချင်​ဖြစ်​သွားမဲ့ စီလီကွန်​ အရုပ်​​လေးနဲ့မိတ်​ဆက်​​ပေးပါမယ်​ ​ဆော်​ကိုအိမ်​ကို​ခေါ်ထားသလိုမျိုး ပြီးပြည့်​စုံ​စေမှာပါ
နူးညံ့အိစက်​တဲ့ စီလီကွန်​ အသားကို အသုံးပြုထားပါတယ်​ ကိုင်​လိုက်​တာနဲ့ ဖိချင်​စိတ်​ဖြစ်​သွား​စေမဲ့ အသားမျိုးဖြစ်​ပါတယ်​
တုန်​ခါမှုပါဝင်​ပီး ​ဆော်​​အော်​တဲ့ အသံပါပါတယ်​
​ဆော်​ညည်းသံက ဒီတိုင်းကြီးအသံမြည်​​နေတာမျိုးမဟုတ်​ဘဲ အသားကို ထိမှသာ ​အော်​ညည်းတာမျိုးဖြစ်​ပါတယ်​ ​ပြောရရင်​ ​ဆော်​ကို လုပ်​လိုက်​ရင်​ထွက်​လာတဲ့ ​ဆော်​ညည်းသံမျိုးပါ
​အော်​ညည်းသံ ၃ မျိုး​လောက်​ပါပါတယ်​
ဓာတ်​ခဲထည့်​ရတာမျိုးမဟုတ်​ဘဲ အားသွင်းပုံစံဖြစ်​လို့ အလုပ်​ရှုပ်​သက်​သာ​စေပါတယ်​
အရှည်​ ၁၆ လက်​မ
ရင်​နဲ့ တင်​အကျယ်​ ၁၀ လက်​မရှိပါတယ်​
ပထမဆုံး Link ကိုဝင်ရာတွင် ပစ္စည်းအမျုိးအစားအများကြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. အဲဒီအထဲကမှာ မိမိ သိလို့သော ပုံကို လက်ဖြင့် ထပ်နှိပ်ပေးပါ . ထိုပစ္စည်းအကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းထားသော နေရာကိုရောက်သါားပါမည် ။ ထိုနေရာတွင် စာ သို့ ပုံ သို့ video တင်ထားပါတယ် တချို့နေရာတွင်တော့ video မပါပါ
Be the first to review “3D Half sex doll (with voice and vibrate)” Cancel reply
Masturbation Cup with Vibrate (Lubricant gift )
Snail mastubator cup
lelo aircraft cup
silicon inflatable doll လေထိုးမတုဆံပင်ပါ
bigbang masturbation cup